Momba ny filaminana
Eny, mandefa manerana an'izao tontolo izao izahay. Hihatra ny vidin'ny fandefasana ary hampidirina amin'ny fizahana. Mihazakazaka fihenam-bidy sy fampiroboroboana mandritra ny taona izahay, koa araho ny fifanarahana manokana.
Haharitra hafiriana ny fahazoako ny baiko?
Delivery time depends on your location. All orders will be shipped from one of our offices in Europe, United States or Asia. When you order, your order will be shipped from the nearest location. You can choose the "standard" or "express" shipping method and the estimated delivery times will be shown at checkout.
Ny fotoana fandefasana dia miankina amin'ny fanemorana ihany koa any amin'ny firenena na faritra misy anao. Ny antsipiriany momba ny fandefasana dia omena amin'ny mailaka fanamafisanao.
Tsindrio Eto hijerena ny ora fanaterana tombanana.
Inona ireo mpandefa entana ampiasainao?
Ampiasainay ny mpitatitra entana lehibe rehetra, sy ny mpiara-miombon'antoka mpampita hafatra eto an-toerana. Hangataka ianao hisafidy fomba fandefasana mandritra ny fizahana.
Manana solomaso misy dokotera ve ianao?
Mampalahelo fa tsy manao izany isika nefa manana lantom-panafody.
Mandra-pahoviana no maharitra ireo solomaso?
Izy ireo dia solomaso isam-bolana izay azonao anaovana in-30. Raha mitazona tsara ny lantiro ianao dia afaka miala sasatra anelanelan'ny andro.
Izahay dia tsy mivarotra lantim-peo mandritra ny taona noho ny antony ara-pahadiovana. Satria mety hanimba ny fahasalaman'ny masonao amin'ny fotoana maharitra.
Inona ny pitsopitsony momba ny solomaso?
Fa maninona no misy fahasamihafana loko raha oharina amin'ny sary ao amin'ny tranonkala?
Ahoana ny fampiasana sy fiarovana ireo lantiro miloko?
Tsindrio Eto hahita ny torolalana.
Inona no vahaolana amin'ny solomaso tokony hampiasaiko?
Manoro hevitra izahay ny hampiasa vahaolana solomaso ho an'ny masolavitra malefaka.
(Hamarino tsara fa tsy mampiasa rano ianao. Hanimba ny lantira izany ary hiteraka aretin-dratsy amin'ny maso.)
Inona no tokony hataoko raha sendra tsy mahazo aina aho na manjavozavo ny fahitako rehefa mitafy aho?
Hamarino tsara fa madio ny solomaso. Ny iray amin'ireo antony mahatonga ny solomaso tsy mahazo aina dia ny hoe misy poti-proteinina ao amin'ilay solomaso. Ny tsara indrindra dia ny fanadiovana azy amin'ny ranon-javatra rehetra. Hamarino tsara fa tsy mampiasa rano ianao. Manimba ny lantira izany ary miteraka aretina.
Ny antony iray hafa dia ny fametrahanao ny masolavitra ao anatiny. Ny lafiny dia misy lafiny roa.
Ny antony fahatelo dia satria nanosotra ilay solomaso ianao. Manome anao fomba fijery manjavozavo koa izany ary tsy mahazo aina firy koa ilay solomaso.
Ny antony farany dia mijaly amin'ny astigmatisme ianao. Midika izany fa hafa ny masonao. Ho an'ity dia mila manatona mpitsabo tena ianao handinihana azy. Mba hahafahanao mividy solomaso noforonina manokana.
Tsindrio Eto hahita ny torolalana
Fampahalalana momba ny fiarovana momba ny fanaovana lantom-pifandraisana.
- Aza manatrika fanatanjahan-tena amin'ny rano rehefa manao solomaso.
Ahoana ny fomba hahitako ny kaomandiko?
Ahoana no fomba hibaikoana?
Tsindrio Eto hahita ny fizotran'ny fanafarana.
Iza amin'ireo fomba fandoavam-bola no arosonay?
Afaka mandoa vola aminay ianao amin'ny iDEAL, PayPal, MasterCard, Visa, Bancontact / Mister Cash, SOFORT Banking, Paysafecard, Visa Electron, Maestro, Bitcoin, Belfius, American Express, KBC, Giropay, EPS, ING Home'Pay ary Cartes Bancaires. Amin'ny maha serivisy fanampiny dia manome ihany koa ny fahafaha-mandoa vola amin'ny alàlan'ny famindrana banky izahay. Tadidio fa ny fomba fandoavam-bola sasany toy ny "famindrana banky" dia mety haharitra andro fiasana vitsivitsy aorian'ny famitana ny fifanakalozana. Handefa anao ny baiko izahay raha vantany vao voaray ny fandoavanao.
Nahomby ve ny fandoavako vola?
Rehefa mahomby ny fandoavanao vola dia hahazo mailaka momba izany ianao. (Misy ihany koa ny mety hahazoanao ny mailaka ao anaty boaty spam-nao)
Azafady azafady fa ny fomba fandoavam-bola sasany toy ny "famindrana banky" dia mety maharitra andro fiasana vitsivitsy vao vita ny fifanakalozana.
Azo atao ve ny mamerina ny baiko?
Noho ny antony ara-pahadiovana dia azonao averina fotsiny ny kaontinao raha tsy misokatra izy ireo ary salama tsara. (Ao anatin'ny 14 andro fiasana nahazoana)
Tsindrio Eto hijerena ny dingana feno amin'ny fiverenana.
Opticcolors dia mpiara-miasa amin'ny lenta loko sy ny fitaovana.
Orinasa holandey izahay izay manana mpanjifa afa-po an'arivony manerantany. Izany dia satria Opticcolors midika ho kalitao, fahamendrehana ary servisy tsaraice.
Efa nieritreritra izahay ary niasa nandritra ny fotoana ela izay ahafahanao manolotra anao lenta ambony loko amin'ny kalitao ambany. Nanandrana zavatra betsaka izahay mba hahitana ny singa mety misy, izay koa ilaina ny mifanaraka tsara amin'ny votoatin'ny rano tsara. Izany dia tokony hiantoka fa ny masonao hijanona ho hydrated sy salama. Mba hanomezana izany rehetra izany dia nifidy ny singa Phemfilcon malefaka tonga lafatra izahay. Ity singa ity dia miantoka fihenam-bidy mora, votoaty avo amin'ny vidiny ary lafo mora vidy izay mety hahazoanao tombony.
Avy eo dia namolavola printy voajanahary tena mety amin'ny karazana maso rehetra izahay. Ny pirinty dia mampanantitrantitra ny hatsaran-tarehy voajanahary amin'ny maso, ka manjary mihabe ilay endrika. Nampifandraisinay tamin'ny lesoka izany Opticcolors lente loko. Opticcolors ny lente loko dia tonga lafatra ho an'ny fety, andro manokana na ho an'ny fampiasana isan'andro.
At Opticcolors resy lahatra izahay fa ny tena hatsarana dia ao anatiny. Samy tsara tarehy amin'ny endriny tokana ny tsirairay. Izahay dia faly manampy anao hahatsapa ho tsara tarehy kokoa noho ianao. Manana fanontaniana ve ianao sa mila advice? Do not hesitate and contact us!
Azonao atao ny mifandray aminay amin'ny mailaka! Faly izahay manampy anao.